people Nepal » सिके राउतलाई छुट दिने अनि ज्ञानेन्द्रलाई हप्काउनेहरु घृणित हुन् सिके राउतलाई छुट दिने अनि ज्ञानेन्द्रलाई हप्काउनेहरु घृणित हुन् – people Nepal
सिके राउतलाई छुट दिने अनि ज्ञानेन्द्रलाई हप्काउनेहरु घृणित हुन्
Posted on January 25, 2017 by Durga Panta
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको चिन्ता लिएर बोल्न पाइन्न भन्ने अधिकार नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छैन । नेपालमा ज्ञानेन्द्र महाराजाको हैसियतमा रहेको बेला उनले शेरबहादुर देउवालाई असक्षम भनि पद च्यूत गरेका थिए । त्यो बेला उनले गल्ति गरेका थिए ।
उनले जे गल्ति गरेका थिए, त्यही गल्ति अहिले राजनीतिक दलका नेताहरुले गरिरहेका छन् । शेरबहादुर असक्षम नै थिए होलान्, त्यो कुरा पत्याउन सकिन्छ । तर उनी असक्षम हुन् भन्ने अधिकार चाहिँ त्यो बेला ज्ञानेन्द्रलाई थिएन । उनी कसैलाई सक्षम र असक्षम भन्ने अधिकार राख्दैनन् थिए । किनभने देशमा सार्बभौम त जनता हुन्छन् । जनताले मत दिएका हुन्छन् । जनताले नै असक्षम भन्न सक्छन् अरुले सक्दैनन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दरबार हत्यकाण्डको मुख्य योजनाकार भने पनि बात लगाइन्छ । यो औपचारिक बात होइन । अनौपचारिक ढंगबाट सडकमा गरिने हल्ला हुन । यदि मुख्य जोजनाकार नै मान्ने हो भने सरकारले उनलाई कारबाही गरे भयो नी त । न उनीसँग सेना छ, न प्रहरी न कुनै पावर । वर्तमान सरकारलाई दरबार हत्यकाण्डको वास्ताविकता थाहा पाउने के कुराले रोकेको छ ?
अर्को कुरा दरबार हत्याकाण्ड भएर दरबारको बागडोर आफ्नो हातमा आयो । ज्ञानेन्द्र राजा भए । त्यो राजपाठ सम्हाल्न सकेनन् । दरबार छाडेर हिँडे । गणतन्त्रलाई स्वीकार गरे । यस्ता व्यक्तिले दरबार हत्यकाण्ड जस्तो भयानक, षडयन्त्र गर्न सकेका होलान र ? सोचनीय विषय यहाँ छ ।
केही नेताहरुले पूर्वराजालाई जेल हाल्छ पनि भन्ने गरेका छन् । तर के भनेर हाल्ने जेल ? जेल हाल्छु भन्नेको के औकात छ ? यसकारण यस्तो सम्भव छैन । ज्ञानेन्द्र त गणतन्त्र स्वीकार गर्ने पहिलो नेपाली हुन् । उनी गणतन्त्रमा छन् तर पनि उनको शीर ठाडो छ । उनले गणतान्त्रिक संस्थाहरुलाई स्वीकारेका छन् । तर ज्ञानेन्द्रलाई हटाएर हामीले जो नेतालाई राज्य सञ्चालनमा पुर्याएका छौं ती नेताहरुको शीर निहुरिएको छ ।
ज्ञानेन्द्रले कसरी दरबार छाडेका हुन भन्ने बुझ्नु पर्छ । त्यो बेलाको काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका गृहमन्त्री जसको गृहमन्त्री त के संसदमा प्रवेश गर्न कुनै औकात थिएन । त्यस्तो अवैधानिक व्यक्तिले तत्कालीन दरबार सचिवालयमा एउटा चिठ्ठी लिएर जान्छ । त्यो चिठ्ठीलाई वैधानिकता दिएर राजाले पत्रकार सम्मेलन गरेर दरबार छाडिदिएका थिए ।
अतः उनले त्यो बेला सजिलै गणतन्त्र बहाली गरिदिए । अहिले भनिन्छ कि पूर्वराजाले बोल्नै हुँदैन । त्यस्तो हो भने कानुन नै बनाए भै गयो नी । कानुनमा ‘पूर्वराष्ट्रअध्यक्षहरुले, पूर्वराजपरिवार सदस्यहरुले मुलुकको चिन्ता गर्न पाउने छैनन्’ भनेर लेखे भइहाल्यो । त्यो पनि गर्न नसक्ने, बोल्नु हुँन्न पनि भन्ने यस्तो गर्न मिल्दैन ।
(राजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा यो लेख तयार पारिएको हो । कुराकानीको भिडियो तलको लिंकमा हेर्न सकिनेछ । ) : नेपाल आजबाट साभार गरिएको /